Teachers connect with language learners with strategy and purpose
Amy Peddie hadahand in shaping Southport High School’s program to help kids learn to speak English, but she almost said no to working with language learners at all.
“I don’t know how,” She remembered thinking. “I’ve never taught that before.”
The influx of immigrant students in Perry Township has placedaspecial pressure on teachers who previously did not have specialized training in working with English language learners. What the district learned as the number of students learning English grew has benefited both the students and their teachers.
But back then, Peddie was so intimidated she thought about quitting teaching altogether.
Instead, she took the job, completed coursework at Indiana University and addedacertificate to her teaching license identifying her as an expert in English language learning.
“I’d never teach anything else now,” said Peddie. “I love it.”
Teachers in Perry Township schools often find themselves in an intimidating position — responsible foraroom of children who speak an array of different languages. It’s Peddie’s job to keep that from feeling overwhelming.
Data source: Metropolitan School District of Perry Township
It’s not like teaching French and Spanish to American students. There are too many languages and not enough bilingual teachers.
“You can’t do that times 67 languages,” said Jane Pollard, who helps train Perry Township teachers. “It was really going to be about teaching best practice and best protocols of teaching languages.”
But knowingastudent’s native language isn’t enough anyway.
By mixing broad strategies and specific techniques into their lessons, teachers can push children from all over the world towardacommon understanding of the basics of English and also learn other subjects at the same time.
There are many techniques, including some that seem simple. Teachers talk slowly, repeat themselves and pronounce words carefully. They use their hands and visual images to get ideas across. They retool lessons so their students learn the same concepts as their peers, but in simplified language and using different sorts of tests.
Most of all, they try to get their students working together, helping each other and capitalizing on what they already know.
“When kids walk in my class, I tell them I expect them to go to college, even if I know some of them might not make it,” Peddie said. “So I think part of it is just about setting the expectation that they can. Can, and will and do.”
>>If you’re an educator, tell us what strategies you use with your English language students so we can follow up with future reporting.
Training all teachers in language learning
Peddie remembers how quickly the need grew for strategies to help English language learners in Perry Township — and how hard it was.
When Peddie, 39, went on maternity leave in 2007, Southport had only 30 students learning English asanew language. When she returned the next semester, after justafew months, that number had grown to 120.
The entire district had to change — and fast.
Since 2001, the number of students learning English in Perry Township grew by more than 4,000 students, or more than 850 percent. Many are refugees who fled civil war in Burma. Today, about one-fifth of the district’s students are learning to speak English.
In response, the district has pushed widespread training for all teachers inaset of strategies designed specifically to help English language learners, known as “sheltered instruction.” More than 800 of the district’s teachers have been trained to teach that way.
Using visual aids, technology and collaboration
One bookshelf in Peddie’s classroom is almost all dictionaries.
They define words in Kurdish, Burmese, French, Spanish, Vietnamese, Mongolian, Arabic, Hindi, Farsi, Swahili and more. Even so, she still doesn’t haveadictionary for every language spoken at Southport.
Peddie only speaks English in her classes so students hear more English words and inflections. It’s one of the strategies inabroad approach she’s found helps students the most.
Inarecent lesson in Peddie’s class, students were to analyzeanews article about cold winters. A traditional class might cover the same ideas by reading several articles.
“I’m not sureaclassroom English teacher would spend an entire day on one article, main idea and supporting details,” Peddie said. “But we try to hold them to the standards. We are trying to teach the concepts, maybe not with the same curriculum, but the same ideas.”
More advanced students were paired with struggling students so they could explain things like snow or agriculture to their peers in their native language. This helps both students progress.
Amy Peddie works withagroup of students duringalesson in her level3English-learner class at Southport High School. The students are doingalesson on time-related words in both the U.S. and their native countries. It’s important for teachers of language-learners to have class work connect to their students’ backgrounds.
Up front, Peddie used an electronic whiteboard to project the article and highlight text. She also triedadifferent visual strategy by giving the studentsaword cloud —agraphic display of the words used the most frequently in the article as bigger than those used less often.
“You’ve done this before,” she reminded the class. “So what are the biggest words on this? Cold — you’re going to write down cold.”
Different experiences, different teaching and different tests
Mike Klopfenstein helps train other teachers in sheltered instruction and has taught Southport’s sheltered sophomore English class foradecade.
The students range from freshmen to juniors with weak English fluency. His job is to keep them on track with the same concepts their peers in regular English classes are learning.
The skills can be challenging: analyzing readings to compare and contrast concepts, for example. It must be taught in language the students can understand, he said.
“The reading level and writing expectations at the high school level are really above what these kids can do,” Klopfenstein said. “Most of these kids haven’t had the basics.”
Klopfenstein tries to connect what his students are learning to their experiences before coming to the U.S.
“We have to tap into what they know,” Klopfenstein said. “So I know with my students, quite often I speak to them about their lives back in Burma and try to connect things that we’re teaching and we’re learning with things they might be learning. I give them the opportunity to teach me.”
Tests have to take the way students learn into account, too. Klopfenstein’s tests might feel pretty strange toastudent anatypical 10th grade English class.
“My assessments will bealot more visual, will require kids to use visuals or drawings,” he said. “I’ll ask them to explain in the best English they have and also draw it so I can see what they’re thinking even though they may not be able to express it clearly through language.”
Although they are specific, Klopfenstein’s methods aren’t magic. It’s just good teaching, he said, and any teacher would recognize it as such.
When teachers are new to working with English language learners, they need to guard against misconceptions, Peddie said.
Take the “quiet period.”
Whenastudent who has just moved from another country who is learninganew language, it is common that they shy away from participating in class or interacting with peers and teachers. But it doesn’t mean they aren’t intelligent, Peddie said.
It happensalot at Southport. Well-trained teachers like Peddie know it when they see it.
Andre comes to mind for Peddie.
In late February, Andre was animated as he worked in class. Talking with his partner, Ting Ting, Andre debated and discussed and asked Peddie all sorts of questions.
But Andre, whose native language is Portuguese, seemed completely different in January when he first started school after moving from Brazil. When asked questions, he simply nodded or shook his head without speaking. He was so quiet early on that Peddie was often unsure how much he understood in class.
But as the quiet period faded, it became apparent Andre knew some English. Peddie was relieved as he soon began to adapt more quickly.
“All students go through culture shock,” Peddie said. “For Andre, because he already had some English, it seems to be shorter for him. He has grownalot, not only in his confidence, but in his willingness to ask questions when he doesn’t understand.”
Los maestros se conectan con los aprendices del idioma con estrategias y propósitos
Más de 800 maestros en el Municipio de Perry han recibido entrenamiento para trabajar con aprendices del idioma.
Amy Peddie tenía una mano en la conformación del programa para ayudaralos niñosaaprenderahablar Inglés de la Secundaria Southport, pero ella casi dijo que noatrabajar con estudiantes para aprender el idioma en lo absoluto.
“Yo no sé cómo”, Recordó pensar. “Nunca había enseñado eso antes.”
La afluencia de estudiantes inmigrantes en municipio de Perry ha puesto una presión especial sobre los maestros que antes no tienen capacitación especializada en el trabajo con los estudiantes del idioma inglés. ¿Qué aprendió el distrito como el número de estudiantes que están aprendiendo inglés creció ha beneficiado tantoalos estudiantes y sus profesores.
Pero en aquel entonces, Peddie fue tan intimidado pensó en dejar de fumar por completo la enseñanza.
En cambio, se tomó el trabajo, cursos completado en la Universidad de Indiana y añadió un certificadoasu licencia de enseñanza identificarla como un experto en el aprendizaje del idioma Inglés.
“Nunca había enseño otra cosa ahora”, dijo Peddie. “Me encanta.”
Los maestros de las escuelas del municipio de Perryamenudo se encuentran en una posición intimidante – responsables de un salón de niños que hablan una variedad de idiomas diferentes. Es el trabajo de Peddie guardarse esa sensación abrumadora.
No es como enseñar francés y españolaestudiantes estadounidenses. Hay tantos idiomas y no suficientes maestros bilingües.
“No se puede hacer eso multiplicado por 67 idiomas”, dijo Jane Pollard, quien ayudaacapacitar maestros del Municipio de Perry. “Iba realmenteaser sobre enseñar las mejores prácticas y mejores protocolos de la enseñanza de idiomas.”
Pero conociendo la lengua materna del estudiante no es suficiente, de todos modos.
Mediante la mezcla de estrategias generales y técnicas específicas en sus clases, los profesores pueden empujaralos niños de todo el mundo hacia un entendimiento común de los conceptos básicos de inglés y también aprender otras materias al mismo tiempo.
Hay muchas técnicas, incluyendo algunas que parecen simples. Que los maestros hablen despacio, que repitan y pronuncien palabras con cuidado. Ellos usan sus manoseimágenes visuales para obtener ideas. Que rediseñen lecciones para que sus estudiantes aprendan los mismos conceptos que sus compañeros, pero en un lenguaje simplificado y usando diferentes tipos de exámenes.
Por encima de todo, traten de conseguir que sus alumnos trabajen juntos, ayudándose unosaotros y aprovechando lo que ya saben.
“Cuando los niños entran en mi clase, les digo que espero que vayanala universidad, aunque sé que algunos de ellos podrían no hacerlo”, dijo Peddie. “Así que creo que parte de ella se trata sólo de establecer la expectativa de que ellos pueden. Pueden, y podrán y lo harán”.
Entrenandoatodos los maestros en aprendizaje de idioma
Peddie recuerda con qué rapidez creció la necesidad de estrategias para ayudaralos estudiantes del idioma inglés en el municipio de Perry – y lo difícil que fue.
Cuando Peddie, de 39, salióalicencia de maternidad en 2007, Southport tenía sólo 30 estudiantes que estaban aprendiendo inglés como un nuevo lenguaje. Cuando regresó el próximo semestre, después de sólo unos meses, ese número había aumentadoa120.
Todo el distrito tuvo que cambiar – y rápido.
Desde 2001, el número de estudiantes que están aprendiendo inglés en el municipio de Perry creció por más de 4.000 estudiantes, o más de 850 por ciento. Muchos son refugiados que huyeron de la guerra civil en Birmania. Hoy en día, alrededor de un quinto de los estudiantes de Southport están aprendiendoahablar inglés.
En respuesta, el distrito ha impulsado la formación generalizada para todos los maestros en un conjunto de estrategias diseñadas específicamente para ayudaralos estudiantes del idioma inglés, conocidas como “instrucción protegida”. Más de 800 de los maestros del distrito han sido entrenados para enseñar de esa manera.
Usando asistencia visual, tecnología y colaboraciones
Un librero en el salón de Peddie es casi puros diccionarios.
Definen palabras en kurdo, birmano, francés, español, vietnamita, mongol, árabe, hindi, farsi, swahili y más. Aun así, todavía no tiene un diccionario para cada idioma que se habla en Southport.
Peddie sólo habla inglés en sus clases para que los estudiantes escuchen más palabraseinflexiones en inglés. Es una de las estrategias en un enfoque amplio que ha encontrado de gran ayuda para los estudiantes.
En una lección reciente en la clase de Peddie, los estudiantes tuvieron que analizar un reportaje sobre los inviernos fríos. Una clase tradicional podría cubrir las mismas ideas mediante la lectura de varios artículos.
“No estoy segura que un profesor de Inglés podría pasar un día entero en un artículo, idea principal y los detalles”, dijo Peddie. “Pero tratamos de mantenerlos dentro de los estándares. Estamos tratando de enseñar los conceptos, quizás no con el mismo plan de estudios, pero las mismas ideas”.
Los estudiantes más avanzados se emparejaron con los estudiantes que lidiaban para que pudieran explicarles cosas como la nieve o la agricultura en su lengua materna. Esto ayuda tanto al progreso de los estudiantes.
En la delantera, Peddie utiliza una pizarra electrónica para proyectar el artículo y resaltar texto. Ella también intentó una estrategia visual diferente, dandoalos estudiantes una nube de palabras – una pantalla gráfica de las palabras utilizadas con más frecuencia en el artículo, más grandes que las que se utilizan con menos frecuencia.
“Ustedes han hecho esto antes”, le recordóala clase. “Entonces, ¿cuáles son las palabras más grandes en esto? Frío – vanaescribir frío”.
Experiencias diferentes, enseñanzas diferentes y exámenes diferentes
Mike Klopfenstein ayudaacapacitaraotros maestros en la instrucción protegida y ha impartido clases de inglésalos de segundo año en Southport durante una década.
Los estudiantes van desde estudiantes de primer año hasta estudiantes de tercer grado con una débil fluidez del inglés. Su trabajo consiste en mantenerlos al corriente con los mismos conceptos que sus compañeros están aprendiendo en las clases regulares de inglés.
Las habilidades pueden ser un reto: lecturas para comparar y analizar los conceptos de contraste, por ejemplo. Debe enseñarse en la lengua que los estudiantes pueden entender, dijo.
“Las expectativas de nivel de lectura y escritura en la secundaria están muy por encima de lo que estos niños pueden hacer”, dijo Klopfenstein. “La mayoría de estos niños no han tenido los fundamentos.”
Klopfenstein intenta conectar lo que sus estudiantes están aprendiendo con sus experiencias antes de veniralos E.U.
“Tenemos que aprovechar lo que saben”, dijo Klopfenstein. “Así que sé que con mis alumnos,amenudo hablo con ellos sobre sus vidas en Birmania y trato de conectar las cosas que estamos enseñando y que estamos aprendiendo con las cosas que podrían estar aprendiendo. Yo les doy la oportunidad de enseñarme”.
Los exámenes también deben de tomar en consideración la forma en que los estudiantes aprenden. Los exámenes de Klopfenstein podrían sentirse bastante extraños para un estudiante cursante del décimo grado en una clase típica de inglés.
“Mis evaluaciones serán mucho más visuales, requeriráalos niñosautilizar imágenes o dibujos”, dijo. “Yo voyapedir que me expliquen en el mejor Inglés que tengan y también que me dibujen así para poder ver lo que están pensando, aunque no puedan ser capaces de expresarlo con claridadatravés del lenguaje.”
A pesar de que son específicos, los métodos de Klopfenstein no son mágicos. Es sólo una buena enseñanza, dijo, y cualquier maestro lo reconocería como tal.
El periodo tranquilo
Cuando los profesores son nuevos en el trabajo con estudiantes del idioma inglés, necesitan protegerse contra las ideas falsas, dijo Peddie.
Tome el “periodo tranquilo”.
Cuando un estudiante que acaba de mudarse de otro país está aprendiendo un nuevo idioma, es común que se aparten de la participación en clase o interactúen con sus compañeros y maestros. Pero eso no quiere decir que no son inteligentes, dijo Peddie.
Sucede mucho en Southport. Profesores bien entrenados como Peddie, lo saben cuando lo ven.
Andre vieneala mente de Peddie.
A finales de febrero, Andre fue animado mientras trabajaba en clase. Hablando con su pareja, Ting Ting, Andre debatió y discutióehizo todo tipo de preguntasaPeddie.
Pero Andre, cuya lengua materna es el portugués, parecía completamente diferente que en Enero cuando empezó la escuela después de mudarse de Brasil. Cuando se le hacían preguntas, él simplemente inclinaba o movía su cabeza sin decir nada. Era tan callado al principio que Peddie estaba insegura de lo mucho que entendía en clase.
Peroamedida que el período tranquilo se desvaneció, se hizo evidente que Andre sabía algo de inglés. Peddie se sintió tranquilizada tan pronto cuando comenzóaadaptarse más rápidamente.
“Todos los estudiantes pasan por un choque cultural”, dijo Peddie. “Para Andre, porque ya sabía algo de Inglés, parece que no fue tanto para él. Ha crecido mucho, no sólo en su confianza, sino que en su voluntad de hacer preguntas cuando no entiende. ”
ဖယ်ရီကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဒေသရှိကျောင်းဆရာဆရာမအယောက်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော်က ဘာသာစကားသင်ယူ သူများနှင့်ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ရန်သင်တန်းများရရှိသည်
အေးမီ ဖက်ဒီ Amy Peddie က အင်္ဂလိပ်စာသင်သည့်ကလေးများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် Southport ဆောက်ပို့အထက်တန်းကျောင်း၏အစီအစဉ်ကိုကိုင်တွယ်ရာမှာပါဝင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဘာသာစကားသင်ယူသူများနှင့်ပူးတွဲလုပ် ကိုင်ရန်ငြင်းဆိုလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။
“ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျမမသိဘူး”ဟု သူစဉ်းစားတာကိုမှတ်မိသည်။ “အဲလိုအရင်ကဘယ်တုန်းကမှစာမသင်ခဲ့ဖူးဘူး”
ဖယ်ရီကျောင်းများအုပ်ချုပ်ရေးဒေသမှာ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေများလာခြင်းဖြင့် အရင်က အင်္ဂလိပ်စာသင်သောကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ရန်သင်တန်းသီးသန့်မရရှိခဲ့သောဆရာအရာမများအပေါ် အ ထူးဖိအားပေးမှုကျရောက်ခဲ့သည်။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှ အင်္ဂလိပ်စာသင်သူလူဦးရေများလာခြင်းဟာ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ နှင့်ဆရာဆရာမများနှစ်ဘက်လုံးအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်ဟု တွေ့ရှိခဲ့သည်။
သို့သော် လွန်ခဲ့သည့်အချိန်က ဖက်ဒီအလွန်ကြောက်လန့်ပြီးကျောင်းစာသင်ပေးသောအလုပ်ကထွက်သွားရန်စဉ်းစားခဲ့ပါသည်။
အလုပ်ကိုထွက်မည့်အစားလုပ်ခဲ့သည်၊ အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်မှသင်တန်းတက်ပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပို့ချရေးကျွမ်းကျင် သူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး သူ့စာသင်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အောင်လက်မှတ်ထပ်ယူခဲ့သည်။
“အခုဆိုကျမ အခြားဘယ်ဘာသာမှမသင်တော့ဘူး” ဟု ဖက်ဒီကပြောပါသည်။ “ကျမတော်တော်ကြိုက်တယ်။”
ဖယ်ရီအုပ်ချုပ်ရေးဒေသကျောင်းဆရာဆရာမများသည် ကြောက်လန့်စရာကောင်းသည့်အနေအထားမှာမကြာခဏရောက်နေသည် ဟု သူတို့မြင်ပါသည် – အခြားဘာသာစကားပေါင်းစုံပြောသည့်ကလေးများနှင့်ပြည့်နေသောအခန်းမှာတာဝန်ကျခြင်းကို ဆိုလိုပါ သည်။ အဲဒီလိုအခန်းမျိုးကို စိတ်လွှမ်းမိုးမှုမဖြစ်သွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာ ဖက်ဒီ၏အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ပြင်သစ်ဘာသာနှင့်စပိန်ဘာသာစကားသင်ပေးတာနှင့်မတူဘူး။ ဘာသာစကားပေါင်း များလွန်းပြီး နှစ်ဘာသာလုံးတတ်ကျွမ်းသည့်ကျောင်းဆရာဆရာမများမလုံလောက်ပါ။
“ဘာသာစကား ၆၇ မျိုးလုံးအတွက်မတတ်နိုင်ဘူး” ဟု ဖယ်ရီဒေသကျောင်းဆရာဆရာမများကိုသင်တန်းပေးသည့် ဂျိန်း ဖိုးလတ် Jane Pollard ကပြောပါသည်။ “ဘာသာစကားသင်ကြားပို့ချရာမှာ အကောင်းဆုံးလုပ်ရပ်နဲ့အလုပ်ကျင့်ဝတ်များကိုသာ ဦး စားပေးရမှာဖြစ်တယ်။”
သူတို့၏သင်ခန်းစာထဲမှာ ကျယ်ပြန့်သောနည်းဗျူဟာနှင့်နည်းနာအတိအကျထည့်ပေါင်းထားခြင်းဖြင့် ကျောင်းဆရာဆရာမများက တကမ္ဘာလုံးမှရောက်လာသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်မှ သူတို့က အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံနားလည်မှုနှင့်တပြိုင်ထဲ ကျောင်းဘာသာရပ်စာများလည်း သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ရိုးရိုးလေးပုံပေါ်သည့်အချို့နည်းလမ်းများအပါအဝင် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာရှိပါသည်။ ဆရာဆရာမများက ဖြေးဖြေးလေးစကားပြော သည်၊ ထပ်ပြီးပြောသည်၊ စာလုံးများကိုဂရုတစိုက်အသံထွက်ပြောသည်။ သူတို့ပြောပြချင်သည့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ချက်များကို ကျောင်းသူကျောင်းသားနားလည်အောင် မြင်တွေ့နိုင်သည့်ပုံတူများကိုလက်နှင့်သုံးသည်။ သူတို့၏သင်ခန်းစာများကို အခြား ကျောင်းသူကျောင်းသားသင်ရသည့်အတွေးအမြင်များလို သူတို့အတွက်ပြုပြင်ပေးသည်၊ ပိုပြီးရှင်းလင်းလွယ်ကူမည့်ဘာသာစကား အသုံးပြုပြီး မတူကွဲပြားသည့်စာမေးပွဲများကိုအသုံးပြုသည်။
အများသဖြင့် သူတို့၏ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို အတူတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ တဦးနှင့်တဦးကူညီခြင်း၊ သိထားပြီးသားအရာများကိုအသုံးချခြင်းများပြုလုပ်ခိုင်းသည်။
“ကျမအတန်းထဲဝင်လာတဲ့ကလေးများကို တချို့ကမတက်ရောက်နိုင်မှန်းကျမသိပေမဲ့ သူတို့ကောလိပ်တက္ကသိုလ်တက်ဘို့ကျမမျှော် လင့်တယ်လို့သူတို့ကိုပြောတယ်” ဟု ဖက်ဒီကပြောပါသည်။ “အဲဒီအတွက် သူတို့တတ်နိုင်မဲ့မ်ျှာလင့်ချက်သတ်မှတ်တယ်လို့ကျမ ထင်ပါတယ်။ တတ်နိုင်တယ်၊ လုပ်မယ်၊ ပြီးတော့ လုပ်တယ်။”
ဖယ်ရီကျောင်းများအုပ်ချုပ်ရေးဒေသမှာရှိသောအင်္ဂလိပ်စာသင်သူများကိုအထောက်အကူဖြစ်မည့်နည်းနာများလိုအပ်တာများလာ ပြီး – ဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာ ဖက်ဒီမှတ်မိပါသည်။
၃၉ နှစ်အရွယ်ဖက်ဒီက ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း ကလေးမွေးရန်ခွင့်ယူသည့်အချိန်မှာ ဆောက်ပို့မှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်သည့်ကျောင်းသူ ကျောင်းသားအယောက်ပေါင်း ၃၀ ရှိပါသည်။ နောက်ထပ်စာသင်နှစ်ကာလတခုမှာသူပြန်ရောက်လာသည့်အခါ သုံးလေးလအတွင်း မှာပင် အဲလိုကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်ပေါင်း ၁၂၀ သို့လူဦးရေတိုးလာသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစပြီး ဖယ်ရီဒေသမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်သည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်ပေါင်း ၄၀၀၀၊ သို့မဟုတ် ၈၅၀ ရာခိုင် နှုန်းတိုးလာသည်။ အတော်များများက မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုရှောင်ပြေးသည့်ဒုက္ခသည်များဖြစ်ကြသည်။ ဒီကနေ့မှာ ဆောက် ပို့ကျောင်းသူကျောင်းသား၏ငါးပုံတပုံက အင်္ဂလိပ်စာသင်နေကြသည်။
တုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသမှ ဆရာဆရာမအားလုံးအတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများကိုအထောက်အကူဖြစ်စေ မည့်နည်းနာများဖြင့် အကျယ်တပြန့်သင်တန်းပေးမှုများဆောင်ရွက်လာသည်။ “အကာအကွယ်ပေးသင်ကြားပို့ချမှု sheltered instruction” ဟုအမည်ရလာပါသည်။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ၏ဆရာဆရာမအယောက်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော်ကို အဲဒီနည်းလမ်း ဖြင့်သင်ကြားပို့ချရန်အတွက် သင်တန်းတက်ခဲ့သည်။
ခါဒစ်၊ မြန်မာ၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ ဗီယက်နမ်၊ မွန်ဂို၊ အာရပ်၊ ဟိန္ဒူ၊ ဖါရ်စီ၊ စွာဟီလီနှင့်အခြားဘာသာ စကားလုံးများကိုအဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ပေး သည်။ ထို့အပြင် ဆောက်ပို့မှာပြောသည့်ဘာသာစကားအားလုံးအတွက်အဘိဓာန်သူ့မှာအစုံမရှိပါ။
ဖက်ဒီက သူ့အတန်းထဲမှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးများနှင့်လေယူလေသိမ်းအသံထွက်ပုံထွက်နည်းများကို ကျောင်းသူကျောင်းသားများပို ကြားစေရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာတခုတည်းသာပြောသည်။ ဒါဟာ ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုအထောက်အကူအများဆုံးဖြစ် စေပြီး ကျယ်ပြန့်သောချဉ်းကပ်မှုနည်းနာများထဲကတခုဖြစ်သည်။
ဖက်ဒီ၏အတန်းထဲမှပြီးခဲ့သည့်သင်ခန်းစာတခုထဲမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် အေးစက်သောဆောင်းရာသီအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်သည့်သတင်းဆောင်းပါးတပုဒ်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရမှာဖြစ်ပါသည်။ ထုံးစံအရအတန်းတခုထဲမှာ ဒီလိုအတွေးအမြင်မျိုးကို ဆောင်းပါးသုံးလေးပုဒ်ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် သင်ကြားပို့ချမည်ဖြစ်ပါသည်။
“ကျောင်းခန်းအင်္ဂလိပ်စာဆရာဆရာမတယောက်က ဆောင်းပါးတပုဒ်ရဲ့အဓိကအတွေးအခေါ်နဲ့ထောက်ခံတဲ့အချက်အလက်များအ ပေါ်မှာ တနေကုန်အချိန်ယူမယူ ကျမအသေချာမသိပါဘူး” ဟု ဖက်ဒီကပြောပါသည်။ “ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို အဆင့်မီအောင်လုပ်ပေးရ မယ်လို့ တာဝန်ပေးဘို့ကျမတို့ကြိုးစားပါတယ်။ အတွေးအမြင်များကိုသင်ပေးဘို့ကျမတို့ကြိုးစာတယ်၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတူချင်မှတူ မယ်၊ ဒါပေမဲ့အတွေးအခေါ်များအတူတူပါဘဲ။”
နှင်းပွင့်သို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလိုဥပမာစာလုံးများကို သူတို့မိခင်ဘာသာစကားဖြင့်ရှင်းပြနိုင်ရန်အတွက် ပိုပြီးအဆင့်မြင့်သည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်ရုန်းကန်နေရသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုတွဲထားပေးသည်။ ဒီလိုနည်းဖြင့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားနှစ်ယောက်စလုံး၏တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
အရှေ့ဘက်မှာ ဖက်ဒီက လျှပ်စစ်သင်ပုန်းကိုသုံး၍ဆောင်းပါးကိုမီးထိုးပြပြီး စာလုံးများကိုမီးမောင်းထိုးပြပေးသည်။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများကိုတိမ်စာလုံးပေးခြင်းဖြင့် အခြားစာသင်ရာမျက်မြင်အထောက်အကူနည်းများလည်းသူသုံးပါသည်။ တိမ်စာလုံး ဆိုသည်မှာ အရွယ်သေးပြီးအသုံးကျဲသည့်စာလုံးများထက် ပိုပြီးမကြာခဏသုံးထားသောစာလုံးများကိုပိုကြီးအောင်လုပ်ထားသည့်ပုံ တခုဖြစ်ပါသည်။
“ဒါကိုအရင်ကသင်တို့လုပ်ဖူးတယ်” ဟု သူ့အတန်းကိုပြောပါသည်။ “အဲဒီတော့ ဒီအပေါ်မှာဘယ်စာလုံးများက ပိုကြီးလဲ။ အေးတယ် – သင်တို့ကအေးတယ်လို့ရေးချမယ်။”
ကွဲပြားသည့်အတွေ့အကြုံများ၊ ကွဲပြားသည့်သင်ကြားပို့ချမှုနှင့် ကွဲပြားသည့်စာမေးပွဲစစ်ဆေးမှုများ
မိုက် ခလိုဖန်စတိန်း Mike Klopfenstein သည် အခြားကျောင်းဆရာဆရာမများကို အကာအကွယ်ပေးသင်ကြားပို့ချမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီးသင်တန်းပေးသည်။ ဆောက်ပို့၏အကာအကွယ်ပေးအင်္ဂလိပ်စာအတန်းဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို စာသင်ပေးတာ ၁၀ နှစ်ရှိပါပြီး။
ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် ပထမနှစ်မှတတိယနှစ်အထိအဆင့်ဆင့်အင်္ဂလိပ်စာတတ်ကျွမ်းမှုအားနည်းကြပါသည်။ သူ့အလုပ် က ပုံမှန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်အတန်းများမှသင်နေရသောအတွေးအမြင်များနှင့်တူသောအရာများသင်ပေးရသည်။ အဲဒီတတ်ကျွမ်းမှု များဟာခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ဖတ်စာများကို အတွေးအမြင်များနှိုင်းယှဉ်ရန်နှင့်ခြားနားချက်များရှာဖွေရန် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရ သည်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများနားလည်နိုင်မည့်ဘာသာစကားနှင့်သင်ပေးရမည်ဟုသူပြောပါသည်။
“အထက်တန်းကျောင်းအဆင့်ရှိစာရေးစာဖတ်အဆင့်ဟာ ဒီကလေးတို့တတ်နိုင်တာထက်ပိုပြီးမြင့်နေတယ်” ဟု ခလိုဖန်စတိန်းက ပြောပါသည်။ “ဒီကလေးအများစုက အခြေခံမရှိသေးဘူး။” ခလိုဖန်စတိန်းက သူ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အမေရိကမလာမီသူ တို့၏အရင်အတွေ့အကြုံများနှင့်သူတို့သင်နေသည့်အရာများကို ချိတ်ဆက်ပေးရန်ကြိုးစားပေးသည်။
“သူတို့သိထားတဲ့အရာကိုအသုံးချရမယ်” ဟု ခလိုဖန်စတိန်းကပြောပါသည်။ “အဲဒီအတွက် ကျနော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများ နဲ့ဆိုရင် သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကဘ၀အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏစကားပြောလေ့ရှိပြီး ကျနော်တို့သင်နေတဲ့အရာများ သင်မဲ့ အရာများနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးဘို့ကြိုးစာတယ်။ ကျနော့ကိုသင်ခန်းစာပေးဘို့သူတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးတယ်။”
စာစစ်ဆေးရာမှာလည်း ကျောင်းသူကျောင်းသားများစာသင်သည့်နည်းများကို ထည့်တွက်စဉ်းစားပေးရမည်။ ခလိုဖန်စတိန်း၏စာ မေးပွဲစစ်ဆေးနည်းသည် ဆယ်တန်းအဆင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ပုံမှန်အတန်းထဲကကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် အတော် ထူးဆန်းပါလိမ့်မည်။
“ကျနော့ရဲ့စာစစ်ဆေးပုံက မျက်မြင်ပုံအများကြီးပိုပါမယ်၊ ကလေးတွေကို မြင်ရတဲ့အရာများအသုံးချခိုင်းမယ် ဒါမှမဟုတ်ပုံဆွဲခိုင်း မယ်” ဟု သူပြောပြပါသည်။ “သူတို့စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အရာများကို ဘာသာစကားနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖေါ်ပြနိုင်သည့်တိုင် အောင် သူတို့အတတ်နိုင်ဆုံးအင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြခိုင်းမယ်၊ ပုံဆွဲပြခိုင်းမယ်၊ အဲဒါမှသူတို့ဘာတွေစဉ်းစားလဲဆိုတာသိရမှာ”
ထိုကဲ့သို့စာမေးပွဲမျိုးဟာအတိအကျဖြစ်သော်လည်း ခလိုဖန်စတိန်း၏နည်းများက မျက်လှည့်မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းသည့်စာသင် နည်းဖြစ်သည်ဟုသူပြောပြီး ကျောင်းဆရာဆရာမများအသိအမှတ်ပြုမည့်နည်းဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းဆရာဆရာမများသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ကြားသူများနှင့်ထိတွေ့ခါစအချိန်မှာ နားလည်မှုလွှဲမည့်အရာများကို ထိန်းချုပ်ထားရန်လိုပါသည်ဟု ဖက်ဒီကပြောပါသည်။
အခြားနိုင်ငံမှပြောင်းလာခါစ၊ ဘာသာစကားအသစ်သင်ကြားနေချိန်ဖြစ်သည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတယောက်က အတန်းထဲမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်သို့မဟုတ်ဆရာဆရာမများ၊ အတန်းဖေါ်များနှင့်ဆက်ဆံပြောဆိုရန် ရှက်တတ်တာဖြစ်နေကြပါ။ သို့သော် သူတို့က မတော်မတတ်ဘူးဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူးဟု ဖက်ဒီကပြောပါသည်။
ဆောက်ပို့မှာအတော်များများဖြစ်သွားပါသည်။ ဖက်ဒီလို သင်တန်းတက်ထားသောဆရာဆရာမများက သူတို့တွေ့ရသည့်အချိန်မှာ သူတို့သိမှာပါ။ အန်းဒြေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလနှောင်းပိုင်းမှာ အန်းဒြေကအတန်းထဲမှာစာသင်တာသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိသည်။ သူ့အတန်းဖေါ် ထင်ထင် Ting Ting
နှင့်စကားပြောသည့်အချိန်မှာ အန်းဒြေကစကားရည်လုငြင်းခုံဆွေးနွေးပြီး ဖက်ဒီကိုမေးခွန်းပေါင်းစုံမေးသည်။
သို့သော် ပေါ်တူဂီမိခင်ဘာသာစကားပြောသည့်အန်းဒြေက ဇနဝါရီလမှာ ဘရာဇီးမှပြောင်းလာပြီးနောက် သူကျောင်းစတက်သည့် အချိန်နှင့်လုံး၀ကွာခြားပုံပေါ်ပါသည်။ သူ့ကိုမေးခွန်းမေးလျှင် စကားမပြောဘဲ သူ့ခေါင်းကိုဘဲခါပြမည်သို့မဟုတ်ခေါင်းငြိတ်ပြမည်။ သူကတိတ်ဆိတ်လွန်းသည့်အတွက် အတန်းထဲမှာသူဘယ်လောက်နားလည်လဲဆိုတာ ဖက်ဒီအသေအချာမသိခဲ့ပါ။
သို့သော် တိတ်ဆိတ်သည့်ကာလကုန်ဆုံးသွားချိန်မှာ အန်ဒြေကအင်္ဂလိပ်စကားအချို့ပြောတတ်ပြီးဆိုတာသိသာပါသည်။ သူက အလျင်အမြန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာသည့်အတွက် ဖက်ဒီကိုစိတ်သက်သာရာဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
“ကျောင်းသူကျောင်းသားတိုင်းဟာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်သောတုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုကိုကျော်ဖြတ်သွားရတယ်” ဟု ဖက်ဒီက ပြောပါသည်။ “အန်းဒြေအတွက်က သူအင်္ဂလိပ်စာတချို့တတ်ထားပြီးသားဖြစ်လို့ သူ့အတွက်ကအချိန်မကြာပါဘူး။ သူတော်တော် လေးရင့်ကျက်လာပါပြီး၊ သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုသာမက သူနားမလည်တဲ့အရာကိုမေးခွန်းမေးဘို့ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်ပါ တိုးတက်လာ တယ်။”
English asasecond language English language learners Indiana University Lost in Translation Perry Township southport high school Teaching